Visa yeTurkey kubva kuQatar: kapfupi gwara - ALinks
Iwe haudi visa yevashanyi yekugara pfupi muTurkey semugari weQatar. Iwe unogona nyore kuenda kuTurkey, kwekushanya, kana bhizinesi, kwenguva yakazara yemazuva zana nemakumi masere, asi haugone kugara munyika kwemazuva anopfuura makumi mapfumbamwe. Kana iwe uchida imwe rutsigiro kuti utarise kuti ndeapi magwaro aunoda kuenda kuTurkey seQatar nyika iwe unogona kushandisa zvakare vhiza sevhisi iVisa or VisaHQ.
Ungawana sei vhiza yeTurkey kubva kuQatar?
Kana iwe uine Qatari pasipoti, haudi vhiza. Qataris inogona kuenda kuTurkey kwenguva yakazara yemazuva zana nemakumi masere kubva pazuva rako rekutanga rekusvika kuTurkey, asi haugone kugara munyika kwemazuva anopfuura makumi mapfumbamwe.
Hapana nekuti haudi vhiza ine Qatari pasipoti. Zvakadaro, kana iwe uchida kuti mumwe munhu aongorore kuti une zvese zvinyorwa zvinodiwa kuti upinde muTurkey unofanirwa kubata iVisa kuti uwane mhinduro nekukurumidza.
Kana iwe uchida rubatsiro rwakasarudzika kumunhu nemagwaro aunoda kuTurkey, unogona kuenda kuburikidza nebasa rakavimbika, se iVisa.
Bvunza rumwe rubatsiro kune maQatar nyika kuIVisa
Unogona kuenda e-Visa Electronic Visa Chikumbiro Sisitimu yeRepublic yeTurkey kutarisa kuti vagari veQatar havadi vhiza yeTurkey.
Yakawanda sei vhiza yeTurkey yeKatar?
Vanogona Qatari vagari kuwana visa pakusvika muTurkey?
EHE, sezvo iwe usingade vhiza asi iwe uchaisa chitambi pasipoti yako paunopinda muTurkey. Qataris inogona kuenda kuTurkey kwenguva yakazara yemazuva zana nemakumi masere kubva pazuva rako rekutanga rekusvika kuTurkey, asi haugone kugara munyika kwemazuva anopfuura makumi mapfumbamwe.
Mufananidzo wekuvhara pamusoro apa ndiEminönü keleskele, Turkey. Mufananidzo na Osman Köycü on Unsplash.
Kutsvaga Mahotera Huru muIstanbul?
Bali Visa, Ndedzipi sarudzo dzevaIndia vanoshanyira Indonesia?
Rwendo rwekuTurkey rwunobhadhara zvakadii?
Turkey ruzivo, zvinobatsira zvinobatanidza nezve kugara muTurkey